July 2018 – Laliguransnews
खराब मौसमका कारण नेपाल र नेदरल्याण्ड्सबीचको खेल रद्ध
खराब मौसमका कारण इंल्याण्डको लर्डर्स मैदानमा भइरहेको नेपाल र नेदरल्याण्डबीचको खेल रद्द भएको छ। इंग्ल्यान्डको लर्ड्स मैदानमा पटक-पटक पानी परेपछि प्रतियोगिता रद्द भएको हो। त्रिकोणीय प्रतियोगिता अन्तर्गत अन्तिम खेलमा नेपालले नेदरल्याण्डबिरूद्ध टस जितेर पहिले पहिले बलिङ गरिरहेको थियो। तर, पटक पटक वर्षाले खेल रोकिएपछि खेल रद्द भएको हो। खेल रोकिनु अघि नेदरल्याण्डले १६.४ ओभरमा ४
डा. केसीका सुझावसहित बालुवाटारमा वार्ता जारी
२७ दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न बिहीबार बिहान सुरु भएको वार्ता अहिले साँझ साढे ६ बजेसम्म बालुवाटारमा जारी छ। दुवै पक्षले बनाएको सहमति पत्रमा डा. केसीले सुझावसहित केही बुँदा सच्याएपछि त्यसबारे बालुवाटारमा छलफल जारी छ। बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बालुवाटारमा भएको वार्ताले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनमा लगभग सहमति जुटाएको थियो। त्यसपछि
इष्ट लन्डन शार्कलाई नेपालले दियो २५२ रनको लक्ष्य
बेलायत भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अन्तिम अभ्यास खेलमा इष्ट लन्डन शार्कलाई २५१ रनको लक्ष्य दिएको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले कप्तान पारस खड्का, उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र दीपेन्द्र सिंह ऐरीको उत्कृष्ट प्रदर्शनले शार्कलाई निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर २५१ रन बनाएको हो। नेपालका लागि उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक ७५ रनको पारी खेले।
सर्वत्र आलोचनापछि सरकारले इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने भएको छ। सरकारले इन्टरनेट सेवाको मूल्य वृद्धि नहुने गरी समायोजन गर्ने भएको हो। साउन १ देखि इन्टवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चारनेट सेर सेवा शुल्क लिने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। ब्यान्डविथ र ‘फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड’को अध्ययनपछि इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा कुनै वृद्धि नगर्ने निर्णय भएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
सागमा क्रिकेट खेल पनि समावेश, यु-२३ टोलीले भाग लिने
६ साउन, काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) मा क्रिकेट र प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता पनि समावेश गरिएको छ । दक्षिण एशियाली ओलम्पिक कमिटीको शनिबार बसेको बैठकले १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुदमा खेलाइने खेलहरुको संख्या २७ वटा पुर्‍याएको छ । यसअघि १२ औं सागमा २३ खेलमा प्रतिस्पर्धा भए पनि कराते र गल्फ समावेश गरेर २५
जर्मनीका चर्चित मिडफिल्डर ओजिलद्वारा सन्यासको घोषणा
एजेन्सी । २९ वर्षे जर्मनीका चर्चित मिडफिल्डर मेसुट ओजिलले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएका छन् । ट्विटरमा अङ्ग्रेजीमा राखिएको दुई पेजको लामो वक्तव्यमा उनले जर्मन फुटबल एसोसिएसनका अध्यक्ष रेइनहार्ड ग्रिन्डेलले यस विश्वकपको हारको सम्पूर्ण दोष आफूमाथि थोपरेको पनि दुखेसो गरेका छन् । विश्वकप २०१८ अघि टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तयिप अर्दोगानसँग खिचाएका उनका तस्बिरहरु सार्वजनिक भएपछिआफूमाथि भएको
प्रियंका र प्रमोदको अन्तरंग दृश्यले बबाल
काठमाडौ – महिला निर्देशक संगीता श्रेष्ठ निर्देशित पहिलो चलचित्र ‘कथा काठमाडौ’ले आफ्नो प्रचारको थालनी गरेको छ । निर्माण युनिटले चलचित्रको पहिलो गीत ‘रातको कुरा’ सार्वजनिक गर्दै प्रचारको थालनी गरेको हो । सार्वजनिक गीतमा इन्दिरा जोशीको स्वर रहेको छ, भने शब्द तथा संगीत प्रदीप बास्तोलाको रहेको छ । गीतमा अभिनेता प्रमोद अग्रहरी र अभिनेत्री प्रियंका कार्की
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डा गोविन्द केसीको कामै अनसन बस्नु भएको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४० औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर सोमबार राष्ट्रियसभागृहमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने- पुष्पकलम दाहाल – डाक्टर गोविन्द केसीको विषयमा म केही भन्न चाहन्न। उहाँले यो पहिलो पटक
युरोप टुरमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले पहिलो अभ्यास खेलमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेको छ। बेलायतको ह्याम्पसायर हग्स क्रिकेट क्लबविरुद्ध शनिबारको पहिलो अभ्यास खेलमा कप्तान पारस खड्काको शतकीय प्रदर्शनमा ३६२ रन बनाएको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ५० ओभरको खेलमा सबै विकेट गुमाउँदै ३६२ रन बनायो। नेपालका लागि कप्तान पारस खड्काले सर्वाधिक १६१ रन बनाए।